Trainers • Brand You Academy
Htet Yie Win isaFounder and Managing Director of BRAND YOU Co.,Ltd., the leading image training company in Myanmar, delivering Image, Personal Branding and Personal development strategies for individual and companies.
She has not only had international experience but also conducted public seminars, corporate trainings, private consultation & coaching in local. She has trained renowned local organizations with multi-cultural background, volunteered herself in training local NGOs, co-facilitate workshops in big cities. Conducting trainings among expatriates, repatriates and locals become one of her contributions to Myanmar’s opening.
၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလတွင် ဆေးတက္ကသိုလ် (၁) ရန်ကုန်မှ M.B.,B.S. ဘွဲ့ကို ရရှိခဲ့ပြီး၊ ယင်းနှစ် မတ်လတွင် Voice ဂျာနယ်ပါ “ဒီမိုကရေစီအလေ့အကျင့်နှင့် မြန်မာလူမျိုး” ဆောင်းပါးဖြင့် စာပေနယ်ထဲသို့ စတင်ရောက်ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂၁၀၆ ခုနှစ်တွင် “ကမ္ဘာကြီးရဲ့တောင်ပံတစ်စုံ” နှင့် “မာန်” စာအုပ်၊ ၂၀၁၇ ခုနှစ်တွင် “အဖြေရှာရခက်တဲ့ပုစ္ဆာ” နှင့် “သားတွေကို ပြောပြပေးပါ” စာအုပ်၊ ၂၀၁၈ ခုနှစ်တွင် “ညီလေးတို့ဖတ်ဖို့” စာအုပ်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်တွင် “သမီးတွေကို ပြောပြပေးပါ”၊ “ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက် ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်” နှင့် “ခေတ်သစ်ရဲ့ တောင်းဆိုမှုများ” စာအုပ်တို့ကို ရေးသားခဲ့ပါသည်။ လက်ရှိတွင် လူမှုကွန်ရက် Facebook ရှိ “ဒေါက်တာ ဖြိုးသီဟ” Page နှင့် ကိုယ်ပိုင် Website ဖြစ်သော https://drphiothiha.com၊ နေ့စဉ်ထုတ်သတင်းစာနှင့် ကျန်းမာရေးဂျာနယ်များ၌ လူငယ်၊ အမျိုးသမီး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး၊ ခေါင်းဆောင်မှု၊ စီမံခန့်ခွဲမှုတို့နှင့်ပတ်သက်သော ဆောင်းပါးများ ပုံမှန်ရေးသားလျက် ရှိပါသည်။
Jack isacontinuous learner and passionate trainer of personal development for individual growth. He upgrades his skills in every5years. In 2002, Jack was graduated from University of LONDON (B.Sc Computing and Information Systems); in 2007, he obtained Specialist Diploma in IT Security from Nanyang Polytechnic (Singapore), and in 2013, he obtained another Specialist Diploma in Supply Chain Management from Republic Polytechnic (Singapore). Jack has become ILO (International Labor Organization) License trainer in 2018. Lastly, in 2020, he graduated with an Executive MBA from Yangon University of Economic (YUE).
Dr.Nang Nay Nwe Phone Myint